Xeerka Xadidista Izmir Lawareegay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirQaanuunka Qaanuunka Izmir waa la aqbalay
16 / 01 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, TURKEY
Nuqir zonetmeligi qabyo qoraalka waa la aqbalay
Xeerarka Xuduudaha ee Izmir waxaa si wada jir ah looga qaatay Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir.
Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ayaa xalay yeeshay kulan lagu diyaariyey fahamka kaqeybqaadashada ee Qabyoqoraalka Qabyada ah ee Sharciga isku raacsan. Qabyo qoraalka ayaa loo diri doonaa Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka maalmaha soo socda si loo ansixiyo.
Shaqada waxaa la bilaabay Febraayo 2018 si loogu diyaariyo Qabyo Qoraalka Sharciga Isugeynta Izmir. Bishii Juun 2019, Qabyo-qoraalka Sharciga Horumarinta Magaalooyinka ayaa waxaa ansixiyay Golaha Magaalada waxaana loo diray Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka si loo ansixiyo. Si kastaba ha noqotee, maaddaama qodobbada la xiriira ee Sharciga Qaanuunka Aagagga La Qorsheeyay ay wax ka beddeleen go'aanka garsoorka, Wasaaradda ayaa weydiisatey Julaay 2019 qabyo-qoraalka in dib loo habeeyo iyadoo la raacayo nooca ugu dambeeya ee Xeerka Aaggaynta Meelaha La Qorsheeyey.
Guddi ayaa loo diyaariyay
Si dib loogu habeeyo qabyo-qoraalka, Guddiga Shaqada Dib-u-habeynta Nidaamka Dib-u-Eegista ee ka kooban wakiilo ka socda Dowladaha Hoose ee Izmir, 14 Degmo oo Degmooyin, qolal xirfadlayaal ah oo xiriir la leh TMMOB, Rugta Ganacsiga Izmir, Rugta Wershadaha ee Gobolka Aegean iyo Iskaashatooyinka Hay'adaha Kormeerka Dhismaha ayaa la sameeyay. Guddigu wuxuu qabtay 2019 kulan inta u dhaxaysa Sebtember 2019-ka iyo Diseembar 12 wuxuuna dib-u-habeeyay Xeerka Nidaamka Xuduudaha ee Dawladda Hoose ee Magaalada Izmir.
Codsashada safar tareen oo dheeri ah oo ka yimid Ödemek-İzmir ayaa la aqbalay
Izmir Metro Inc. la isku raacay, Boqolkiiba 25 ayaa la aqbalay
Nidaamka Xadidista Izmir
Qaanuunka Qaanuunka Izmir
Xeerka Aagaynta Goobaha Aaga Qorshaysan ee İzmir